Kana uri kutarisana nenharo nehutano hwako hwekutengesa uye iwe wakagadzirirwa kuDHCP ipapo, kuongorora kunze kwekuita yako IP kero inogona kunge iri basa. Kushandisa Static IP Address kunobatsira kuvhara pikisheni yePI kukakavadzana pakati pemashandisirwo emakambani uye kunobatsira kutungamira kwavo nyore. Ichi chinyorwa chichakuratidza kuti ungagovera sei static IP address on a Windows 10 kombiyuta.
Sarudza kero ye IP static in Windows 10
Muzviitiko zvakawanda, maIndaneti yePCs kana makombiyuta anongogadzirirwa kuDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ne router inoenderana. Izvi zvinobatsira sezvo zvigadzirwa zvinobatanidza kunhare yako pakarepo. Iwe unochengetedza dambudziko rekugadzirisa manyore yeIndaneti yeIndaneti yega yega yega chigadziri iwe pachako. Zvisinei, pane kukanganisa kumwe kunobatanidza nehutachiona - Ipikisi yeIndaneti inogona kuchinja nguva nenguva.
Kugadzirisa IP static inogona kudiwa kana iwe uchigara ugovana mafayela, igovera printer kana kana uchigadzira Port kuenda mberi.
Tichaona nzira nhatu dzokuzviita:
1] Kugadzirisa static IP address neDirect Panel
Kungofa-kanda purogiramu yemutambo (kana kuti Wi-Fi) inoonekwa pa Windows 10 Taskbar.
Kubva pane zvinyorwa zve 2 zvisarudzo zvinoratidzwa, sarudzai yekupedzisira - Vhura Network neIndaneti zvirongwa.
Enda kune Wi-Fi settings uye pfugama pasi zvishoma kuti uwane 'Related Related Settings'chikamu. Kana pawanikwa zvakawanikwa pa 'Shandura zvigadziri zvinyorwa'link inowanikwa ipapo.
Pakarepo, firiji yakasiyana ichazarura uye inokutungamirira kune Network Connections chikamu cheDain Panel.
Kungofa-chengetedza yehutano yehutano iwe unofanirwa kugadzika static IP-address yei uye sarudza 'Properties'sarudzo.
Mushure maizvozvo, sarudza Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) kuona pasi pe 'Networking'tab uye hit the'Properties'bhatani.
Shandura musarudzo kuti 'Shandisa idilesi ye IP inotevera'.
Iye zvino tanga mukova kune minda inotevera, inowirirana nekugadzirisa keseti yako.
IP kero (Tsvaga uchishandisa ipconfig / zvose raira)
Subnet Mask (Pamutambo wemusha, i255.255.255.0)
Default Gateway (Ndiyo kero ye IP yako router.)
Pakupedzisira, usakanganwa kutarisa 'Gadzirisa zvirongwa paunenge ubudasarudzo. Zvinobatsira Windows kukurumidza kutarisa IP kero yako nyowani uye nerumwe ruzivo rwakakodzera kuti uve nechokwadi chekuti inoshanda.
Kana vose vakatarisa zvakanaka, chengetedza bhokisi re 'OK' uye ivhare kunze kwekambani yemashandisi yemadhora.
2] Sarudza Nhamba yeIndaneti yeIndaneti kuburikidza nemitemo
Dzvanya Zvirongwa icon uye sarudza 'Network & Internet'tab.
Sarudza Wi-Fi> Yazvino kubatana, kureva, network iyo iwe yawakabatana.
Tsvaga pasi kusvika pane chikamu chezvidzidzo zveP IP uye warova pepeta bhatani.
Zvino, apo 'Zvirongwa zve IP'window ichitsvaira, hit the arrow-down-down and select'manyuwari'sarudzo.
Tora iyo IPv4 toggle switch.
Ikozvino, sarudza static IP kero. Uyewo, gadza Subnet urefu hwekuyera (subnet mask). Kana yako subnet mask iri 255.255.255.0, ipapo subnet chimbichimbi urefu muzvigaro ndeye 24.
Kana wamboitwa, gadzira kero yeDefault Gateway, Adferred DNS kero uye Chengetedza shanduko.
3] Kupa Kushandiswa kweIndaneti yeIndaneti neWashShell
Vhura Powershell seMutungamiriri uye pinda mutemo unotevera kuti uone yako ikozvino network network configuration-
Kutevera izvi, nyora pasi mashoko anotevera:
Mushure maizvozvo, pinda murairo unotevera kuti ugadzire static IP kero uye pinda ku Enter.
Nyowani-NetIPAddress -InterfaceIndex 15 -IPAddress 192.168.29.34 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.29.1.
Zvino, shanduka DefaultGateway neine gateway risina kero yero ye network yako. Ita chokwadi chekuchinja iyo InterfaceIndex nhamba neyo inowirirana ne adapta yako uye IP Kero ine kero ye IP yaunoda kuisa kune yako kifaa.
Kana wapedza, Tora mutemo unotevera ugovera dNS sepadi ye server uye tapinda kuIta.
Isa-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1
Chengetedza kuchinja uye kubuda.
Ndinovimba izvi zvinobatsira.
Isa uye Gadzira ISC DHCP Server muDebian 9